Sina 2020 varotra tsara mahazaka hafanana silipo fantsona fantsom-panafody ao amin'ny tontolon'ny insuline china fantsom-bozaka silika mahitsizoro fanamboarana sy orinasa | Jujie
2020 varotra tsara mahazaka hafanana silipo matevina fantsom-pako ao amin'ny tontolon'ny insolika any Shina
mena, manga, fotsy, mainty, mavo, ect
habe / tsy mahazatra
varavarana sy Windows, milina, sns
Kaonty ambany indrindra:
22019 varotra tsara mahatohitra hafanana silipo fantsona fantsom-boasary ao amin'ny tontolon'ny insulina fantsom-baravarana silika mahitsizoro
Product famaritana ny sombin-tsolika silipo
Rehefa mila vokatra vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo avo lenta ianao dia matokia ny kalitao sy ny maha matihanina asehontsika eto amin'ny alibaba. Maharitra sy lasitike. Mihazona fanoherana ny hafanana avo sy ambany. Tsy mitondra herinaratra. Eto amin'ny Jujie, izahay dia nanatsara ny fizotran'ny fanamboaranay ho tonga lafatra hanolotra vokatra tsara izay azonay antoka fa ho afa-po ianao. Mifanaraka amin'ny fenitra ISO 9001: 2015 izahay. Manolotra safidy fividianana matetika izahay ary koa safidy fividianana ambongadiny.
fantsom-bozaka silika mahatohitra hafanana
Halavan'ny maripana: -40 ℃ - 200 ℃
Namboarina manokana izy io, tsy misy poizina, tsy mahazaka hafanana, fanoherana ny fahanterana, mahazaka hafanana ambony 200 ℃ sy herinaratra avo.
Somary malama izy io, malefaka sy malefaka.
Mety amin'ny kabinetra, fiara, kaontenera, famafazana, vata fampangatsiahana, haingon-trano, varavarana sy Windows, milina. Ny fitaovana avo lenta dia azo zahana ho fantsom-bokatra ary vokarina arakaraka ny fenitra.
Ny hakitroky ny 0,8 eo ho eo, ny fiakarana haingana, ny fitarihana hafanana ambany.
Azonao atao ny manonta ny logo anao aminy misy marika, sy fepetra hafa.
Afaka manome anao santionany izay ho araka ny takinao, toy ny habe, ny hateviny, ny lokony ary ny hamafiny.
Tombony azo amin'ny vokatra: fanoherana ny hafanana 1.High,Tsy mahazaka hafanana ambany.
4.Teknolojia dia matotra, milamina kalitao.
5. Azo namboarina faritra tsy fenitra.
6. Ny habeny marina.
Sombin-tsolika vita amin'ny silika vita amin'ny savony (mm) Tavoahangy vita amin'ny silipo vita amin'ny silika (mm)
Bara boribory Bara vita amin'ny kianja Bara voalaza Araka ny famokarana baiko.
φ2 8 × 8 Karazana P
φ3 8 × 10 Karazan-telozoro
φ4 10 × 10 Ny famaritana manokana dia azo ampanjifaina amin'ny loko, karazana karazany tsara.
Ny vidiny dia ho an'ny referansa ihany, ny tena vidiny dia miankina amin'ny vokatra manokana.
Sarin'i foily silipela
Vokatra mifandraika amin'ny sombin-tsolika silipo
Antsipiriany bebe kokoa momba ny orinasa sy ny vokatray, tsindrio ny logo etsy ambony raha te hahalala bebe kokoa.
Previous: Fantsona vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo malefaka miady amin'ny fantsom-bary vita amin'ny silipo malefaka mihena 2020
Manaraka: Tube fantsom-baravarankely vita amin'ny silipo avo lenta
tsara tarehy mahatohitra hafanana silipo tubin tubin ...
fanoherana ny hafanana avo lenta sinoa ...
sponjy sônaly sela mihidy rora vita amin'ny fingotra
Fitaovana spaonjy silika spaoro miendrika afo 2020 / hig ...
savaivony lehibe conductive silipo fantsona fantsom SP ...
Eko-namana sakafo kilasy vita amin'ny rivotra fingotra Reinfor ...